Waxyaabaha Sare Loo Yeelanayo Shabakadaha Ku Faa'iideysta Webka Ugu Sareeya ama Sawirrada Barnaamijka
Waxaa jira farsamooyin badan oo lagu xanaaneeyo marka barnaamijka. Marka lagu daro qorista qoraalada, waa inaad la shaqeysaa koox si aad u hirgeliso istaraatijiyadaha ugu wanaagsan oo aad uga hesho xog faa'iido leh shabakadda. Nasiib wanaag, hadda waxaan leenahay dhowr barnaamij oo caawiya xirfadlayaasha xirfadleyda iyo barnaamijyadeeda si ay u gutaan waajibaadkooda.
Quruxda quruxda badan
Waa maktabad casri ah Python oo leh daraasado gaar ah oo loogu talagalay in laga soo saaro xogta laga helay faylasha HTML iyo XML - royal blue and orange fascinator. Shirkadda quruxda badani waxay ku habboon tahay nidaamka Debian iyo Ubuntu labadaba.
Sida quruxda quruxda badan, Soo dejinta. Io waa barnaamij dhamaystiran oo xog-ururinta. Waxay noo ogolaanaysaa in aan xoqno oo abaabulno xogta waxaanuna lahaaneynaa farsamo sare. Mozenda
Mozenda waa mid si dhakhso ah loo isticmaali karo shabakadda shabakada barnaamij kaas oo soo saaraya tayada tayada internetka, waxay ku tirtirtaa iyo soo bandhigtaa qaab la aqrali karo.
ParseHub waxaa loo isticmaali karaa in laga soo saaro macluumaadka qoraalka, sawirrada, iyo fiidiyoowga. Waxa kale oo aad abuuri kartaa API-ka kala duwan bogagga aad jeceshahay adigoo isticmaalaya barnaamijkan.
Waa barnaamij cajalad oo bilaash ah iyo barnaamij macmiil oo loogu talagalay isticmaaleyaasha Windows. Waxaad u gudbin kartaa xogta qalanta foomka qaabeysan iyadoo la isticmaalayo Octoparse. Waa faa'iido leh barnaamijka iyo barnaamijyada webka.
Macluumaadka soo saaraha ama xoqitaanka waa bilaash waana mid fiican oo laga helo aragtida SEO. Waxaan baari karnaa goobo kala duwan oo isticmaalaya barnaamijkan.
Xiriirinta waa sahlan tahay isticmaalka xogta xogta. Waxaad u baahan tahay kaliya inaad soo dejiso, rakibto oo aad dhaqaajiso. Waxay ku timaadaa lacag la'aan lacag la'aan ah.
Macluumaadka soo saaraha ama xoqista waxay bixisaa dataset ee boggagaaga qaylo dhaantada leh oo leh fursado saarista xogta qashinka si looga faa'iidaysto.
Waa adeeg wanaagsan oo wax ku ool ah. Diiqadadu waxay xoqin karaan goobo kala duwan waxayna u rogi karaan foomamka xogta qaabaysan.
UiPath waa warshad robotik ah robotik ah oo ka timaadda kharashka oo bilaash u noqon kara xogta macaamiisha ee bogagga sadexaad ee xisbiga. Waxay ku haboon tahay Windows iyo nidaamyada hawlgalka ee la midka ah.
Waa wax cajiib ah oo faa'iido leh sawir gacmeed ujeedooyin gaar ah iyo xirfad. Waxaad si fudud u dhejin kartaa Mashiinka Maqaarka ee Webka waxayna fududeyneysaa sifooyinka wanaagsan.
Waa mid ka mid ah shabakadaha ugu daba-dheer iyo xogta macaadiinta. Waxaa loogu talagalay barnaamijka iyo kuwa aan barnaamijka ahayn.
Web Wareega. io
Waa faahfaahin dheeraad ah oo ah Chrome oo loo isticmaalo in lagu soo saaro xogta laga helo bogag badan oo isku mid ah. Waxay ku haboon tahay bogag internetka ah.
Barnaamijka Web Sundrew
WebSundew waa muuqaalka macluumaadka maqan ee muuqda oo u shaqeeya xogta cayriin iyo habdhaqan. Daabacaadda shirkadda ayaa kuu ogolaaneysa inaad ka xisho server-ka fog ama FTP.
Waa wax soo saarka xogta cusub ama wax xoqista oo ku haboon isticmaaleyaasha Windows. Winautomation wuxuu awood u siinayaa inaan nadiifino hawlaha webka ku salaysan.